Alcazar nke Segovia | Akụkọ Njem
Maria | | Spain obodo, Segovia
N'agbata osimiri Clamores na Eresma, Alcázar de Segovia na-arịgo n'elu oké nkume, ụlọ mgbe ochie nke sitere n'aka ndị agha nke a na-ejikwa dị ka obí eze. Edere ịdị adị nke ebe a kemgbe mmalite nke narị afọ nke iri na abụọ na n'ime akụkọ ntolite, ndị eze Spain dị iche iche na-agbasawanye ma na-emeziwanye akụrụngwa ha ruo mgbe ha nwetara ụdị silhouette pụrụ iche, nke mere Alcázar bụ ebe e wusiri ike pụrụ iche ma e jiri ya tụnyere ụlọ ndị ọzọ. nke Spain.
1 Akụkọ banyere Alcazar nke Segovia
2 Mara Alcázar nke Segovia
2.1 Mpụga ije
2.2 Ime ụlọ ime ụlọ
2.2.1 Leylọ Galley
2.2.2 Ime ụlọ Ime ụlọ
2.2.3 Ocheeze ime ụlọ
2.2.4 Chamberlọ Royal
3 Ahịa na usoro nke Alcázar nke Segovia
Akụkọ banyere Alcazar nke Segovia
N’ebe ahụ, achọtala foduru nke ashlar granite ndị yiri nke ọwa mmiri Rome, nke na-egosi na n’oge Rom, enwere ebe ewusiri ike ma ọ bụ ebe ewusiri ike ebe a. N'elu nke a, e wuliri ebe ewusiri ike ka ebe ewusiri ike nke Spanish-Arab na enwere otutu oge ka ndi ozo di ka Alfonso X ma obu Felipe II gbasaa ma weghachi ya. Nke a ji akụkọ ifo ya ugbu a. N'ezie, Alcázar nke Segovia jere ozi dị ka mmụọ nsọ yana nnukwu ụlọ Bavaria nke Neuschwanstein gaa Walt Disney iji mepụta ụlọ mbụ Disneyland ya.
N'oge emepechabeghị anya, maka ọdị nso nke ebe ịchụ nta dị mma na maka nchekwa, Alcázar nke Segovia ghọrọ otu n'ime ebe obibi kachasị mma nke ndị eze Castilian, ọkachasị Alfonso X el Sabio ahụ e kwuru na mbụ. Na mgbakwunye, ọ hụrụ ihe omume dị oke mkpa maka akụkọ ntolite nke Spen dị ka mkpọsa nke Isabel la Católica dị ka Queen of Castile na Disemba 1474 ma ọ bụ nnukwu nche n'etiti Felipe II na Ana de Austria na nnukwu ụlọ ụka dị na Nọvemba 1570.
Mgbe e mesịrị, a ga-eji Alcázar nke Segovia mee ụlọ mkpọrọ ruo mgbe Carlos nke Atọ guzobere Royal College of Artillery na Segovia na 1762, nke nwere isi ụlọ ọrụ ya n'otu ụlọ ahụ. N'etiti narị afọ nke iri na itoolu ọkụ malitere ibibi ụlọ elu ndị mara mma nke ọnụ ụlọ ndị a ma ama. Ọ dabara nke ọma, a ga-ewughachi ha ma emechaa site na ihe osise José María Avrial y Flores mere na 1839.
Ọtụtụ iri afọ mgbe e mesịrị, nke dịkarịrị na narị afọ nke 1953, e kwupụtara na ọ bụ ihe ncheta nka na nka na XNUMX ka emepụtara Boardtù Na-ahụ Maka Alcázar.
Mara Alcázar nke Segovia
E kewara Alcázar nke Segovia ụzọ abụọ: nke dị na mpụga ya na drabridge na ebe a na-edebe ya, ụdị mbara ègbè Herrerian na moat ahụ; na ime-ulo nke ime-ulo nke ulo-elu-ya di, ebe ọnọdu mara nma di.
Alcázar nke Segovia na-emegharị na nkume nke ọ nọ n'elu ya, nke mere na nhazi ya adịghị agbanwe agbanwe. Site n'ebe dị anya, ụlọ elu ya siri ike pụta ìhè, nke wuru site n'aka Juan II, nna Isabel la Católica. Ime ya bụụrụ ụlọ mkpọrọ maka ndị a ma ama. Ọ bụrụ na ị nwere ohere, ọ bara uru ịrịgo ụlọ elu ahụ n'ihi na ọ na-enye gị ohere ịtụgharị uche n'echiche dị egwu nke obodo Castilian. Ihe a na-eche nche abụghị nnukwu ụlọ elu Juan II, kama ọ bụ okirikiri nke dị na ugwu.
Ime ụlọ nke Alcázar nke Toledo nwere ụlọ ihe ngosi nka nke ngwa agha na ụfọdụ ebe ndebe akụkọ ihe mere eme nke ndị agha ugbu a. N'ime ya anyị na-ahụ ime ụlọ dị mma n'ụdị Mudejar na Elizabethan Gothic. Onye wuru ya bu Alfonso nke Asatọ, onye choro ime ka ime ulo ya di nma site na ichikota oriọna.
Foto | Akwụkwọ ntuziaka
O nwere uko ụlọ ekpuchitere nke mbụ n'ụdị ụgbọ mmiri a gbanwere agbanwe nke nka Mudejar. Eziri ya iwu ka Queen Catherine nke Lancaster wulite ya n'oge ọchịchị nwa ya nwoke John II. Na windo enwere windo iko abụọ nwere ntụpọ na-anọchite anya otu Enrique III nke Castile na ezinụlọ ya na nke ọzọ Enrique II nwere ihe ngosi nke ọnwụ Pedro I na Juan II.
N’otu mgbidi nke ime ụlọ ahụ enwere nnukwu eserese na-egosi nchighari nke eze nwanyị Isabel la Católica dị ka Queen of Castile n’ụlọ ụka San Miguel de Segovia.
Ime ụlọ a kwekọrọ n'usoro nke Alcázar n'oge ọchịchị Felipe II. N'elu mgbidi ị nwere ike ịhụ eserese nke Felipe II na onye ọzọ nke nwa ya nwoke Felipe III, arịa dị iche iche site na narị afọ nke XNUMX, ihe mpempe akwụkwọ Flemish sitere na narị afọ nke XNUMX na isiokwu nke alụmdi na nwunye nke Lady anyị
Ocheeze ime ụlọ
N'ime ime ụlọ a ka ocheeze dị n'okpuru ebe mkpuchi ya na uwe nke ogwe aka nke ndị Katọlik Katọlik na ụkpụrụ ha "Tanto Monta", nke bụ egwuregwu nke mmalite narị afọ nke iri abụọ.
N'elu mgbidi ya ị nwere ike ịhụ ihe ngosi nke ndụ ezinụlọ nke Ndị Ọchịchị Katọlik ma anyị nwekwara ike ịhụ akwa nke nwere ihe mkpuchi brocade nke ejiri ọla edo.
Ahịa na usoro nke Alcázar nke Segovia
A na-akwụ ụgwọ tiketi zuru ezu na euro 8 ma nye gị ohere ịga na ụlọ ndị Obí, gaa na Artillery Museum ma nwee ọ ofụ echiche nke Segovia site na oflọ Elu nke Juan II.
Ọnụ ụzọ nke naanị Obí na Artillery Museum nwere ọnụ ahịa nke euro 5,50 ma kwado ya maka ndị na-enweghị ike ịrịgo ụlọ elu ahụ n'ihi mbugharị ma ọ bụ nsogbu ahụike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Segovia » Alcazar nke Segovia